Redlight Survivor: Nosy maty – mangalatra&Hack – Torohevitra Android Cheats
Te ho lehilahy manankarena indrindra eran-tany ve ianao? Te hifoha ao amin'ny villa ve ianao ary hitondra fiara tsara tarehy haka ny ankizivavinao?
4 5 6 miliara no miandry ny tompony mendrika azy.
Irinao izany? Tsy maintsy manaporofo ny hasarobidinao ianao ary sahy mandresy ny fanamby ho avy amin'ny tafita velona amin'ny Red Light: Nosy maty. Ny fanamby dia mitovy amin'ny simulator fahazazana mahazatra 3D mampientam-po sy mahavariana K- lalao.
Esory ny ambiny mba hananana ny piggy bank volamena ho anao.
Misy fanamby maromaro tsy maintsy atrehinao alohan'ny handraisanao ny tananao amin'ny nofinofinao:
– Jiro maitso mena
– Dalgona challenge na cookie cracker
– Tarika ady
– Ny ady mamatonalina
– Ny vato tohatra fitaratra na tetezana fitaratra
– Maminavina marbra
Ny lalao voalohany dia ho fanamby lalao jiro mena maitso maitso izay hitsapana ny faharetanao sy ny halatrao. Ny tanjonao dia ny hiampita ny tsipika fahatongavana nefa tsy tratran'ny saribakoly goavambe. Rehefa miteny hoe Greenlight dia avela hifindra ianao fa rehefa miteny Redlight, tsy maintsy mijanona ny hetsika rehetra raha tsy izany dia hofoanana ianao. Ataovy ao an-tsaina fa misy fe-potoana ka tsy maintsy mihazakazaka haingana araka izay tratra ianao raha tsy te ho faty eny an-kianja.
Ny fitsipika roa tokony hotadidinao dia: Atsaharo rehefa mena ary Mihazakazaka rehefa maitso.
Ny lalao faharoa, ny fanamby Dalgonal dia mitaky anao handrava ny vatomamy mba hivoaka amin'ny endrika isan-karazany toy ny kintana, elo, faribolana,…
Ny lalao fahatelo, Tarika ady, mila mampiasa hery ara-tsaina sy ara-batana ianao mba handresena amin'ny vondrona hafa. Tsarovy ihany 50% ny aminareo dia ho tafavoaka velona amin'ity lalao ity.
Ny lalao fahefatra, mila maminavina ny isan'ny marbra hafahafa na eny eny an-tanan'ny mpifanandrina aminao ianao, izay mahazo ny marbra mpifanandrina rehetra
Ny lalao fahadimy – vato tohatra fitaratra, mila mandinika tsara ianao mba hisafidianana ny vato fitaratra tsara mba tsy hiafaran'ny neninao ny anjaranao.
Ahoana no filalaovana
– Kitiho raha hihetsika
– Mihazakazaka haingana rehefa maitso
– Mijanòna foana rehefa mena
– Mozika mahafinaritra sy lohahevitra mahafinaritra
– Hoditra isan-karazany misy valisoa be dia be miandry mialoha
– Ny lalao ihany koa dia mora fehezina
Tsarovy: Ireo izay tsy mahavita ny fanamby dia tsy maintsy miatrika ny fahafatesana mahatsiravina.
Ampidino izao raha voatendry ho olona tsara vintana ianao izay ho velona farany.
← Trivia Deluxe – mangalatra&Hack Lalao Poppy an-tserasera – mangalatra&Hack →
One thought on “Redlight Survivor: Nosy maty – mangalatra&Hack”
zortilonrel Novambra 13, 2021